मृत्यु पछि अर्को संसारमा के हुन्छ?, रहस्यमय परलोक जीवनको बारे मा जान्नुहोस् – List Khabar
Home / समाचार / मृत्यु पछि अर्को संसारमा के हुन्छ?, रहस्यमय परलोक जीवनको बारे मा जान्नुहोस्
मृत्यु पछि अर्को संसारमा के हुन्छ?, रहस्यमय परलोक जीवनको बारे मा जान्नुहोस्
admin February 1, 2022 समाचार Leaveacomment 133 Views
मृत्यु यस संसारको अपरिवर्तनीय सत्य हो, जसले जन्म लिएको छ उसको मृत्यु निश्चित छ। तर एक प्रश्न सधैं मानिसहरुको दिमागमा उठ्छ कि मृत्यु पछि के हुन्छ। यदि त्यहाँ आत्मा छ, यो कहाँ जान्छ? मृत्यु पछि मानव शरीर शिथिल हुन्छ। त्यहाँ धेरै अनुसन्धान भएको छ जुन अझै चलिरहेको छ। त्यहाँ प्रकृति को धेरै अनसुलझा रहस्यहरु छन् जो हल गर्न को लागी अझै पनी छन्। ती मध्ये एक आत्मा र मृत्यु हो।
तर महाभारतको युद्धमा भगवान कृष्णले अर्जुनलाई गीता उपदेश दिँदै भने कि आत्मा अमर छ, जसले शरीर मात्र परिवर्तन गर्दछ। उनले भने कि आत्मा मार्न सकिदैन। जसरी पुरूषले पुरानो लुगा उतारेर नयाँ लुगा लगाउछ, त्यसरी नै आत्माले पनि केहि समय पछि नयाँ शरीर धारण गर्छ, तर नयाँ शरीर लगाउनुको अर्थ सधैं मानव शरीर होइन।
मृत्यु को रहस्य मा अनुसन्धान जारी छ
कुनै मानिस को मृत्यु पछि ऊर्जा, चेतना के हुन्छ? यस्ता धेरै प्रश्नहरु मनमा उठ्छन्। वैज्ञानिकहरुले मृत्यु संग सम्बन्धित रहस्यहरु लाई उजागर गर्न को लागी धेरै पटक कोसिस गरेका छन्, तर उनीहरु अहिले सम्म सफल भएका छैनन्। विज्ञानले जीवविज्ञानका धेरै रहस्यहरु उजागर गरेको छ, तर मृत्यु संग सम्बन्धित धेरै रहस्यहरु छन् जो अझै अनसुलझ छन् ।
यो मानिन्छ कि मृत्यु पछि पुन: जन्म लिन को लागी धेरै बर्ष लाग्दछ । र कहिले काहिँ नयाँ जन्म तुरुन्तै हुन्छ । एक नयाँ शरीर एक व्यक्ति को लागी उसको कर्म को फल को आनन्द को लागी पर्खन्छ र तब सम्म आत्मा लाई निष्क्रिय राखिन्छ। एक व्यक्ति आफ्नो कर्म र संस्कार अनुसार नयाँ जन्म पाउँछ। मृत्यु को समय मा, एक किसिम को भावनाहरु को एक व्यक्ति को दिमाग मा रहन्छ, उसले योनी को उस प्रकार प्राप्त गर्दछ। धार्मिक मान्यता अनुसार योनिहरु दुई प्रकारका हुन्छन्। पहिलो पितृ योनी हो र दोस्रो प्रेत योनी हो। पुर्खाहरु मध्ये, त्यहाँ गंधर्व, यक्ष र सिद्ध छन्, जसमा यो विश्वास छ कि योद्धा योनी सर्वश्रेष्ठ हो।
यो अझै पनि रहस्य नै छ
यो रहस्य रहन्छ कि मृत्यु पछि जीवन छ कि छैन। त्यहाँ कुनै प्रमाण छैन जसद्वारा हामी जान्न सक्छौं कि मृत्यु पछि जीवन छ। धेरै पटक मानिसहरुले यो सुनेको हुनुपर्छ कि अजीब सपनाहरु मृत्यु भन्दा पहिले आउँछन्। यो एक रिपोर्ट मा रिपोर्ट गरीएको छ कि मानिसहरु जो मृत्यु को नजिक छन् उनकोमा, एक उत्तेजना प्रणाली उनको शरीर मा सक्रिय रहन्छ ।
Previous कोभिड ठीक भएपछि पनि यी कुरामा ध्यान नदिए ज्यान जानसक्छ !
Next २०७८ साल माघ १९ गते बुधबार, हेर्नुहोस् यस्तो छ तपाईको राशि अनुसारको भाग्यफल…